WARBIXIN: Maxaa ka jira in Madaxweynaha ay dacwadi kaga furnayd dalka Mareykanka? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka WARBIXIN: Maxaa ka jira in Madaxweynaha ay dacwadi kaga furnayd dalka Mareykanka?
WARBIXIN: Maxaa ka jira in Madaxweynaha ay dacwadi kaga furnayd dalka Mareykanka?
(Muqdisho) 04 Maajo 2021 – Warbixinta uu qoray, wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee New York Times, waxaa lagu sheegay in xilligii Madaxweyne Farmaajo iska celiyey dhalashada waddankaas, ay muddo u dhaw ku bilaabatay baadhista kiis dacwadeed khuseeya dhanka cashuur celinta.
Qoraalka Codka, Dhageyso: Madaxweyne Farmaajo ma haystaa baasaboorka Canada?
Previous articleUjeedka ugu wayn ee loosoo diray wefdiga Qadar & arrin aysan haboonayn in lala soo qaado
Next articleMaxaa keenay inuu dalku muto mashaqada uu haatan muquuranayo?